သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ လက်ဗွေရာများ အကြောင်း – အောငျနိုငျသူ
လူတစ်ဦးရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ လက်ဗွေရာများ
ဆိုတဲ့ လက်ဗွေကို- သာမုဒြီက လက္ခဏာ ကျမ်းတွေမှာ- ချက္ကရ (၀ါ) စကြ်ာ၊ ဒါမှမဟုတ် – သျှံခ शंख ဆိုတဲ့ ခရုသင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်နော်။ ဗိဿနိုး နတ်ဘုရားရဲ့ လက်ချောင်းတွေမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာကတော့- ခရုပတ် လက်ဗွေ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ အချက်တခုက- လက္ခဏာ နဲ့ ဇာတာ ပညာကို ပေါင်းစပ်တဲ့ ပညာတွေ အရ ဆိုယင် စကြ်ာ လက်ဗွေ- တနည်းအားဖြင့် ခရုပတ်ဗွေ ဟာ- ရာဇယုဂ် ကို ဖေါ်ပြတာပါတဲ့။
ခရုပတ်ဗွေ တခုပါယင်- ရာဇယုဂ် တခုဖြစ်ပြီး ၁၀-ခုပါယင် ရာဇယုဂ် ၁၀-ခု ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့် သူများကို မမှီခို၊ လမ်းကြောင်းသစ် ဖောက်ထွက်မယ့်၊ အရှင်သခင် လက်ပါတဲ့။
သက်ဆိုင်ရာ လက်ချောင်း အလိုက် – Field တခုမှာ ဖောက်ထွက် တတ်ကြပါတယ် ဖောက်ထွက်ပြီး လမ်းကြောင်းသစ်ရှာသူမှသာ အရှင်သခင် ဖြစ်တာမို့ ဒါဟာလည်းသဘာဝကျတဲ့ အချက်တခုပါ။ လက်မ မှာ ခရုပတ်ဆိုယင်- သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် လက်ခလယ်မှာ ခရုပတ် စကြ်ာ ကတော့ ရှားပါး ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကတော့- လက်ဗွေ ဆိုတာ- စကြာဝဠာက စွမ်းအင်တွေကို ခံယူတဲ့ Receptors တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဗွေ ဟာ အဲဒီလူတစ်သက်မှာ မပြောင်းတော့ပါဘူး။ -လက်ဗွေမှာ လမ်းကြောင်းလေးတွေ ရစ်ပြီး ၀င်သွားတဲ့ အခါ- ခရုပတ်ရဲ့ ဗဟို အလယ်ချက် ကနေ- စကြ်ာဝဠာ စွမ်းအင်တွေကို- ကိုယ်ထဲ ယူသွင်း နိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့် သူ့မှာ စွမ်းအား ပိုရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ -လက်ဖ၀ါး က လမ်းကြောင်းတွေကတော့- စွမ်းအင်တွေ ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပြီး- အပြောင်းအလဲ- ရှိနေတတ်ပါတယ်.. စင်္ကြာဝဠာ ရဲ့ စွမ်းအင်တွေကို လက်ခံ သုံးစွဲ နိုင်ဘို့ အတွက်- တရားထိုင် တဲ့ အခါ၊
ဆုတောင်းတဲ့ အခါ တွေမှာ- လက်ဖ၀ါးတွေကို အပေါ်လှန်ထားပြီး- လက်ခံတဲ့ အနေထား ဖြစ်နေဘို့ သင်ကြားပေးကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယောဂ ကျင့်စဉ်တွေမှာ. မုဒြာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးဟာ- သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်များကို လက်ခံနိုင်ဘို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ – လက်ဆယ်ချောင်း စလုံး ခရုပတ် ဖြစ်နေသူ ဆိုယင် တော့သူရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက် ဟာ- ကျော့ကွင်းဗွေ ဆိုတဲ့- Loop ဆယ်ချောင်း ဖြစ်သူ ဆိုယင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ တယောက်က- လမ်းကြောင်းသစ် ဖောက်ထွက်သူ၊ အများနဲ့ဆန့်ကျင် နေတတ်သူ၊ တယောက် အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်သူ တဦးကို တဦး ဖြည့်ဆည်းဘက် ဖြစ်နေကြလို့ပါနော်။ सामुद्रिक သာမုဒြီက ကျမ်းအရ ဟိန္ဒူ နတ် ဘုရားမှ လူအဖြစ်
အ၀တာရ ၀င်စားတဲ့အခါ- ၃၂ ပါး သော လက္ခဏာ အင်္ဂါရပ်များ ပါရှိပါတယ်နော်။ လက်ချောင်းပေါင်းများစွာ- စကြ်ာ လက်ဗွေ၊ ခရုပတ် လက်ဗွေ ဖြစ်နေယင် – နတ်ဘုရားဓါတ် များသူ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်- ဇီဝါ အတ္တမာ နဲ့ ပရမ အတ္တမာ – အပိုင်း ၂-ခုမှာ-မြင့်မြတ်တဲ့ ပရာမ အတ္တမာ အပိုင်းက ပိုများသူများ ဖြစ်ကြတယ် လို့- ကျမ်းဂန် တို့က ပြဆိုပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှု မြင့်မားလွန်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သွားလာ သွက်လက် လှုပ်ရှားနေတတ်တဲ့ Crvesသမားတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ဟာ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီတွေကို တောင်းခံတတ်ကြပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ချမှတ် ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသူတွေအပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးမှု ရှိတဲ့ သြဇာဓါတ်တစ်မျိုးပါရှိလေ့ ရှိတတ်ပြီးတခြားသူတွေရဲ့ အမြင်ကိုတော့ လေးစားတတ်ပါတယ် သူတို့ဟာထိလွယ်၊ ရှလွယ် တဲ့ စိတ်မျိုးရှိပြီးကြေကွဲတယ် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ဘ၀ ထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ..။
ဥရောပမှာလူသုံးအမျာဆုံးနဲ့ အတွေ့ရအများဆုံးလက်ဗွေ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ် သူတို့တွေ ဟာစိတ်နေစိတ်ထား ဖြူစင်ပြီးတခြားသူတွေရဲ့ စိတ်မချမ်းသာမှု ၊ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မှုတွေကို ဝေမျှ ခံစားပေးကြတဲ့ အကောင်းဆုံး Listeners တွေပါ။
စာနာနားလည်မှု စိတ်အပြည့်အ၀ ရှိသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ပြည့်ဝ ကောင်းမွန်တဲ့ လူသားမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာဆိုတာကို သဘောကျနှစ်သက် သူများလဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူတို့ ဟာအိပ်မက် မက် မနေဘဲ အလုပ်ကိုသာ ထလုပ်တတ်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အချစ်ရာတွေ ဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု မရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မွေးကတည်း က ပါရမီပါလာပြီး သိလွယ် ၊ တတ်လွယ်တဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုပြင်ယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြတဲ့ လူစားမျိုးတွေမှာ Swirls လက်ဗွေရာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကြိုးစားရင် အောင်မြင်နိုင်သလောက် ကိုအရည်အချင်းရှိကြပေမဲ့ အရာတစ်ခုထဲကို ရေရှည် စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိဘဲ ငြီးငွေ့သွားတတ်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့်
သူတို့ ဟာမအောင်မမြင် ဖြစ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အနုပညာရှင်အများအပြားဟာ Swirls သူတို့ဟာစိတ်ခံစားချက်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြလေ့မရှိကြတဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်သဘောကိုခန့်မှန်းမိနိုင်ဖို့ သိတ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
လူတိုင်းကိုသံသယကြီးကြီးထားပြီးချဉ်းကပ်လေ့ရှိတာသူတို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။ စိတ်ကူးနဲ့ အကြံအစည် စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအလွန်ထက်မြက်ပြီးတည်တံ့ခန့်လွန်းတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်မျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အများကနည်းနည်း ရွံ့ကြပေမဲ့ သူတို့ ပင်ကိုယ်သဘောကတော့ ကောက်ကျစ်မှု ကိုမုန်းတီးတဲ့ လူတွေ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။credit
လူတဈဦးရဲ့ အနာဂတျကို ဖျောပွနတေဲ့ လကျဗှရောမြား
ဆိုတဲ့ လကျဗှကေို- သာမုဒွီက လက်ခဏာ ကမျြးတှမှော- ခက်ြကရ (ဝါ) စွကျာ၊ ဒါမှမဟုတျ – သြှံခ शंख ဆိုတဲ့ ခရုသငျး လို့ ချေါပါတယျနျော။ ဗိဿနိုး နတျဘုရားရဲ့ လကျခြောငျးတှမှော ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မွနျမာကတော့- ခရုပတျ လကျဗှေ လို့ ချေါပါတယျ။ထူးခွားတဲ့ အခကျြတခုက- လက်ခဏာ နဲ့ ဇာတာ ပညာကို ပေါငျးစပျတဲ့ ပညာတှေ အရ ဆိုယငျ စွကျာ လကျဗှေ- တနညျးအားဖွငျ့ ခရုပတျဗှေ ဟာ- ရာဇယုဂျ ကို ဖျေါပွတာပါတဲ့။
ခရုပတျဗှေ တခုပါယငျ- ရာဇယုဂျ တခုဖွဈပွီး ၁၀-ခုပါယငျ ရာဇယုဂျ ၁၀-ခု ဖွဈပါတယျတဲ့ တနညျးအားဖွငျ့ သူမြားကို မမှီခို၊ လမျးကွောငျးသဈ ဖောကျထှကျမယျ့၊ အရှငျသခငျ လကျပါတဲ့။
သကျဆိုငျရာ လကျခြောငျး အလိုကျ – Field တခုမှာ ဖောကျထှကျ တတျကွပါတယျ ဖောကျထှကျပွီး လမျးကွောငျးသဈရှာသူမှသာ အရှငျသခငျ ဖွဈတာမို့ ဒါဟာလညျးသဘာဝကတြဲ့ အခကျြတခုပါ။ လကျမ မှာ ခရုပတျဆိုယငျ- သိပျမထူးဆနျးပါဘူး ဖွဈတတျကွပါတယျ လကျခလယျမှာ ခရုပတျ စွကျာ ကတော့ ရှားပါး ပါတယျ။ တကယျတမျးကတော့- လကျဗှေ ဆိုတာ- စကွာဝဠာက စှမျးအငျတှကေို ခံယူတဲ့ Receptors တှေ ဖွဈပါတယျ။ လကျဗှေ ဟာ အဲဒီလူတဈသကျမှာ မပွောငျးတော့ပါဘူး။ -လကျဗှမှော လမျးကွောငျးလေးတှေ ရဈပွီး ဝငျသှားတဲ့ အခါ- ခရုပတျရဲ့ ဗဟို အလယျခကျြ ကနေ- စွကျာဝဠာ စှမျးအငျတှကေို- ကိုယျထဲ ယူသှငျး နိုငျပါတယျတဲ့။
ဒါကွောငျ့ သူ့မှာ စှမျးအား ပိုရှိခွငျး ဖွဈပါတယျ။ -လကျဖဝါး က လမျးကွောငျးတှကေတော့- စှမျးအငျတှေ ဖွနျ့ဖွူးပေးတဲ့ နရော ဖွဈပွီး- အပွောငျးအလဲ- ရှိနတေတျပါတယျ.. စင်ျကွာဝဠာ ရဲ့ စှမျးအငျတှကေို လကျခံ သုံးစှဲ နိုငျဘို့ အတှကျ- တရားထိုငျ တဲ့ အခါ၊
ဆုတောငျးတဲ့ အခါ တှမှော- လကျဖဝါးတှကေို အပျေါလှနျထားပွီး- လကျခံတဲ့ အနထေား ဖွဈနဘေို့ သငျကွားပေးကွခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ယောဂ ကငျြ့စဉျတှမှော. မုဒွာ ပုံစံ အမြိုးမြိုးဟာ- သကျဆိုငျရာ စှမျးအငျမြားကို လကျခံနိုငျဘို့ လုပျဆောငျခွငျး ဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ – လကျဆယျခြောငျး စလုံး ခရုပတျ ဖွဈနသေူ ဆိုယငျ တော့သူရဲ့ အိမျထောငျဘကျ ဟာ- ကြော့ကှငျးဗှေ ဆိုတဲ့- Loop ဆယျခြောငျး ဖွဈသူ ဆိုယငျ အကောငျးဆုံး ပါပဲ လို့ ဆိုပါတယျ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ တယောကျက- လမျးကွောငျးသဈ ဖောကျထှကျသူ၊ အမြားနဲ့ဆနျ့ကငျြ နတေတျသူ၊ တယောကျ အမြားနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နတေတျသူ တဦးကို တဦး ဖွညျ့ဆညျးဘကျ ဖွဈနကွေလို့ပါနျော။ सामुद्रिक သာမုဒွီက ကမျြးအရ ဟိန်ဒူ နတျ ဘုရားမှ လူအဖွဈ
အဝတာရ ဝငျစားတဲ့အခါ- ၃၂ ပါး သော လက်ခဏာ အင်ျဂါရပျမြား ပါရှိပါတယျနျော။ လကျခြောငျးပေါငျးမြားစှာ- စွကျာ လကျဗှေ၊ ခရုပတျ လကျဗှေ ဖွဈနယေငျ – နတျဘုရားဓါတျ မြားသူ ဖွဈပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့- ဇီဝါ အတ်တမာ နဲ့ ပရမ အတ်တမာ – အပိုငျး ၂-ခုမှာ-မွငျ့မွတျတဲ့ ပရာမ အတ်တမာ အပိုငျးက ပိုမြားသူမြား ဖွဈကွတယျ လို့- ကမျြးဂနျ တို့က ပွဆိုပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျစိတျခမြှု မွငျ့မားလှနျးပွီး ပတျဝနျးကငျြမှာ သှားလာ သှကျလကျ လှုပျရှားနတေတျတဲ့ Crvesသမားတှကေိုတှရေ့မှာပါ။ သူတို့ဟာ သူငယျခငျြးတှကေို တနျဖိုးထားပွီး သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အကူအညီတှကေို တောငျးခံတတျကွပမေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုတော့ ကိုယျတိုငျ ခမြှတျ ဆုံးဖွတျကွတဲ့ သူမြား ဖွဈပါတယျ။
တခွားသူတှအေပျေါကိုလှမျးမိုးမှု ရှိတဲ့ သွဇာဓါတျတဈမြိုးပါရှိလေ့ ရှိတတျပွီးတခွားသူတှရေဲ့ အမွငျကိုတော့ လေးစားတတျပါတယျ သူတို့ဟာထိလှယျ၊ ရှလှယျ တဲ့ စိတျမြိုးရှိပွီးကွကှေဲတယျ ဆိုတာကိုလညျး သူတို့ဘ၀ ထဲမှာမကွာခဏတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ ..။
ဥရောပမှာလူသုံးအမြာဆုံးနဲ့ အတှရေ့အမြားဆုံးလကျဗှေ ပုံစံ ဖွဈပါတယျ သူတို့တှေ ဟာစိတျနစေိတျထား ဖွူစငျပွီးတခွားသူတှရေဲ့ စိတျမခမျြးသာမှု ၊ စိတျမသကျမသာ ဖွဈမှုတှကေို ဝမြှေ ခံစားပေးကွတဲ့ အကောငျးဆုံး Listeners တှပေါ။
စာနာနားလညျမှု စိတျအပွညျ့အ၀ ရှိသူမြားပဲ ဖွဈပါတယျ ကိုယျရညျကိုယျသှေး ပွညျ့ဝ ကောငျးမှနျတဲ့ လူသားမြိုးတှေ ဖွဈပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတာဆိုတာကို သဘောကနြှဈသကျ သူမြားလဲ ဖွဈပါတယျနျော။
သူတို့ ဟာအိပျမကျ မကျ မနဘေဲ အလုပျကိုသာ ထလုပျတတျကွတဲ့သူတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ရဲ့ အခဈြရေး၊ အခဈြရာတှေ ဟာ နူးညံ့သိမျမှမှေု့ မရှိတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
မှေးကတညျး က ပါရမီပါလာပွီး သိလှယျ ၊ တတျလှယျတဲ့အပွငျ ပတျဝနျးကငျြကို ပွုပွငျယူဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနကွေတဲ့ လူစားမြိုးတှမှော Swirls လကျဗှရောတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကွိုးစားရငျ အောငျမွငျနိုငျသလောကျ ကိုအရညျအခငျြးရှိကွပမေဲ့ အရာတဈခုထဲကို ရရှေညျ စိတျဝငျစားလမေ့ရှိဘဲ ငွီးငှသှေ့ားတတျတဲ့ စိတျတှကွေောငျ့
သူတို့ ဟာမအောငျမမွငျ ဖွဈကွလရှေိ့ပါတယျ။ အနုပညာရှငျအမြားအပွားဟာ Swirls သူတို့ဟာစိတျခံစားခကျြကိုမကျြနှာပျေါမှာပျေါလှငျအောငျ ဖျောပွလမေ့ရှိကွတဲ့ အတှကျ သူတို့ရဲ့ အတှငျးစိတျသဘောကိုခနျ့မှနျးမိနိုငျဖို့ သိတျတော့ မလှယျကူလှပါဘူး။
လူတိုငျးကိုသံသယကွီးကွီးထားပွီးခဉျြးကပျလရှေိ့တာသူတို့ရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေး ဖွဈပါတယျနျော။ စိတျကူးနဲ့ အကွံအစညျ စဉျးစားတဲ့နရောမှာအလှနျထကျမွကျပွီးတညျတံ့ခနျ့လှနျးတဲ့ ရုပျရညျပိုငျရှငျမြိုးတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ အမြားကနညျးနညျး ရှံ့ကွပမေဲ့ သူတို့ ပငျကိုယျသဘောကတော့ ကောကျကဈြမှု ကိုမုနျးတီးတဲ့ လူတှေ ဘဲဖွဈပါတယျ။credit